Miracle Glow छालाको सेतोपन र pigmentation को लागी मास्क
Miracle Glow छालाका लागि सेतो रंगको मास्क हो। उपचार पनि pigmentation को उपस्थिति रोक्दछ। उत्पादन एक विशेष सूत्रमा आधारित छ - ओमेगालाइट - केसर बीउबाट उत्पन्न लिनोलिक एसिडको साथ, आधुनिक टेक्नोलोजीले राम्रो प्रभावको लागि सिर्जना गरेको छ, अर्थात् छालामा गहिरो र द्रुत प्रवेश, गहन हेरचाह प्रदान गर्दै। Miracle Glow सबै छाला प्रकारका लागि उपयुक्त छ र कुनै पनि उमेरमा सिफारिस गरिएको छ। यसको सूत्रमा धेरै शक्तिशाली प्राकृतिक सामग्रीहरू छन्। यो घरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मास्क कहाँ किन्ने?
यो छाला बत्ती Miracle Glow तलको ब्यानरमा क्लिक गरेर आधिकारिक अनलाइन स्टोरमा खरीद गर्न सकिन्छ:
माथिको लिंकमा क्लिक गरेर अनलाइन स्टोरमा मास्क किनेका प्रत्येक ग्राहकलाई अनुरोध छ कि उनीहरूको ईमानदारी प्रतिक्रिया लेखको तल हाम्रो ब्लगमा छोड्नुहोस्! यो उत्पादन किन्न अरू ग्राहकहरु लाई सहयोगी हुनेछ।
को गुणहरु Miracle Glow - ब्लीचिंग सिद्धान्त
पिग्मेन्ट स्पटहरूमा अनियमित आकार हुन्छ। तिनीहरू कुनै पनि आकारको हुन सक्दछन् (मिलिमिटरदेखि धेरै सेन्टिमिटर मापन गर्न) प्राकृतिक छालाको छाया भन्दा गाढा खैरो खैरो रंगको। अनुहारलाई असर गर्ने बित्तिकै, ती उपस्थिति बिगार्छन् (फ्रेकल्सको बारे सोच्नुहोस्), जब सम्पूर्ण शरीरमा अवस्थित हुन्छन्, उनीहरूले यो असम्भव बनाउँदछन् (वा बरु शर्मनाक) समुद्री किनारमा जान।
पिग्मेन्ट स्पटको उपस्थिति फरक प्रकृतिमा हुन सक्दछ: जन्मदेखि (आमा बुबा, हजुरबा हजुरआमा र अन्य आफन्तहरूबाट पारित), चयापचय विकार, छालाको रोग, उमेर सम्बन्धी हार्मोनल परिवर्तन, आदि। कहिलेकाँही कस्मेटिक उत्पादनहरू पर्याप्त हुन्छन्, जबकि अन्य अवस्थामा। विशेष उपकरण र अन्य उपचार आवश्यक हुनेछ। सौन्दर्य उत्पादनहरू अन्य औषधीहरूको साथ उपयुक्तसँग प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
माथी माथि विचार गर्दा के फाइदा हुन्छ Miracle Glow? यसको मुख्य लक्ष्य भनेको तपाईलाई गाढा दाग र धब्बाबाट मुक्त गर्नु हो, र पनि (उत्पादकहरूले दावी गरेको अनुसार) तिनीहरूको पुनरुत्थान रोक्न। यो एन्टी-पिग्मेन्टेशन मास्कको दोस्रो महत्त्वपूर्ण विशेषता यो हो कि यसले तपाईंको रंगलाई अझ र स्वस्थ बनाउँदछ। यो विशेष गरी छाला, घाँटी र पलकहरू जस्तै छालाको संवेदनशील क्षेत्रहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
अधिक नाजुक र प्रभावशाली छालाको सेता बनाउने र उपस्थिति सुधार गर्ने बिमा गर्न, Miracle Glow पिग्मेन्टेसनको लागि मास्कले छालाको प्रत्येक कोषमा प्रत्येक अणुहरू छिर्न नवीनतम टेक्नोलोजीहरूबाट फाइदा उठायो। यस मास्कमा आक्रामक एक्सफोलिटिating्ग एजेन्टहरू छैन, यो केवल प्राकृतिक पदार्थहरू (उदाहरणका लागि सेतो माटो) र तेलबाट बनेको छ, छालालाई ओसिलोइजि and र पोषणकारी बनाउँदछ (उदाहरणका लागि, कोको बटर)।
सामान्यतया बोल्ने, Miracle Glow मास्क, पौष्टिक तेल र माटोमा धनी, अनुहारको आकृतिहरूलाई कडा बनाउँदछ, झिम्काइहरू सुचारु बनाउँछ र रंगलाई समृद्ध बनाउँछ। त्यसकारण, मास्कसँग अनुप्रयोगहरूको विस्तृत श्रृंखला छ र अनुहार र घाँटीको छाला सुधार गर्नका साथै ड्याकोलेट क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हामी तपाईंलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं कि यो सुन्दरता उत्पादनले एक हप्तामा ठूलो स्थापित-स्थापित उमेर स्पटहरू हटाउन सक्नेछैन, तर यदि तपाईं यसलाई नियमित रूपमा लागू गर्नुहुन्छ, परिणाम तपाईंलाई 8 हप्ता पछि खुशी पार्नेछ! सानो नयाँ स्पटहरू चाँडै नै खाली हुनेछ, जबकि नयाँहरू देखा पर्दैन।
यो Miracle Glow संरचना
कुनै कस्मेटिक उत्पादनले लामो पानीको जीवनलाई अनुमति दिन शुद्ध पानी, एक राम्रो सुगन्ध, केही संरक्षक र गाढा (जस्तै xanthan गम) समावेश गर्दछ। तिनीहरूलाई यहाँ विस्तार गर्न यो मतलब छैन। को मुख्य घटक Miracle Glow हो:
काओलिन। उपचारात्मक माटो, जसले सेतो पार्दछ, सूक्खा सुक्खा ड्रेल्ड पोर्सलाई संकुचित गर्दछ;
थियोब्रोमा काकाओ बटर। छालामा ब्लीचिंग, टोनिंग र पौष्टिक प्रभाव छ, यूभी विकिरणबाट बचाउँछ;
भिटामिन कुसुमको बीज तेलको साथ समृद्ध। यसले ब्लीच गर्न, नरम पार्ने र मॉइश्चराइज गर्ने प्रभावको लागि एक बहुअस्याचुरेटेड लिनोलिक एसिड समावेश गर्दछ;
असुरक्षित सोयाबीन तेल। यो ओलिक, स्टेरिक, लिनोलिक, पाल्मेटिक एसिड, टोकोफेरोल, फाइटोस्टेरोलमा समृद्ध छ। यसले छालाको पानी सम्बन्धी गुणहरू सुधार गर्दछ र यसलाई पुनर्स्थापित गर्दछ;
दही र ल्याक्टिक एसिड। मास्कको भाग हुनु Miracle Glow, तिनीहरूसँग धेरै राम्रो सेतो पार्ने प्रभाव छ (साथै कुनै पनि सुसंस्कृत दुग्ध उत्पाद, उनीहरूले छाला एकदम कुशलताका साथ नरम गर्दछन्;
रोजमेरी आवश्यक तेल। यो उत्पादन एक स्वभाव घटकको रूपमा पनि उमेर स्पट गोरा गर्न राम्रो काम गर्दछ। पिग्मेन्टेशनको लागि मास्कको एक अंशको रूपमा, आवश्यक रोजमेरी तेलले अन्य सामग्रीहरूको पूरक बनाउँछ, जुन यसले यसको गुणहरू बढाउँदछ;
इजाजतपत्र जड़ को निकासी। यसले छालाले मेलानिनको संश्लेषणलाई निषेध गर्ने पदार्थ समावेश गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, यो एक सेतो, antiinflammatory र विरोधी बुढ़ापे प्रभावहरु छ;
Rapeseed तेल। यसले ओलिक एसिडको एक ठूलो मात्रा समावेश गर्दछ, जुन एक उपयोगी एन्टिआक्सीडन्ट हो, युवाको एक साँचो भिटामिन;
Glycerol, प्यान्थेनोल (भिटामिन B5), allantoin, tocopherol एसीटेट (भिटामिन ई), isopropyl palmitate, cyclomethicone दिनुहोस् Miracle Glow यसको संरक्षण र चिसो धारणा गुणहरू।
सेतो मास्कको आवेदन र परिणामहरू
छाला-सेतो उत्पादन Miracle Glow अरू जस्तो प्रयोग गर्न सजिलो छ। सँधै एउटा नियम लागू हुन्छ: चिकित्सा र सौन्दर्य उत्पादनहरू सफा छालामा लागू गर्नु पर्छ। यो दिमागमा, पिग्मेन्टेसन मास्क लागू गर्न तयार हुनुहोस्। यहाँ प्रयोगको लागि सिफारिश चरण-द्वारा-चरण निर्देशनहरू छन् Miracle Glow:
छालामा पिग्मेन्टेशन मास्कको बाक्लो तह फैलाउनुहोस्, ओठ र आँखा क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दै;
यो 20 मिनेट भन्दा बढि काम गर्न अनुमति दिनुहोस्;
न्यानो पानी संग कुल्ला।
Miracle Glow3दिनमा7भन्दा बढि कम लागू हुँदैन। पाठ्यक्रम4देखि 8 हप्ता सम्म रहन सक्छ, सबै आकार र pigmentation को आकार र यसको प्रकृति र यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि यस सेतो मास्कका निर्माताहरूले उपचारपछि नयाँ गाढा दागहरू देखा पर्न रोकथामको उल्लेख गरे, प्रत्यक्ष यूभी विकिरणबाट बच्न नभुल्नुहोस्।
सही ग्राहक समीक्षा Miracle Glow मुकुट
सस्तो र कुशल चिकित्सा सौन्दर्य प्रसाधन को लागी, केहि कारणले मानिसहरु क्वालिटीका बारे सोच्न बिर्सन्छन् कहिलेकाँही, कम्पोनेन्ट सूची पढेर र हर्बल र प्राकृतिक सामग्रीहरूको एक ठूलो संख्याको साथसाथै किफायती मूल्यको बारेमा उत्साहित हुँदै, मानिसहरूले उत्पादको सत्यतामाथि प्रश्न गर्न बिर्सन्छन्। आजकल धेरै विक्रेताहरूले प्रीमियम सौन्दर्य उत्पादनहरूको सस्तो प्रतिलिपिहरू बेच्छन, जुन वास्तविकतामा सुन्दर लेबलको साथ कम गुणस्तरको नक्कलहरू हुन्। स्क्याम हुनबाट जोगिन, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले म्याद समाप्त हुने मिति जाँच गर्नुभयो, निर्माता (प्याकेजिंग र भित्र सबै जानकारी), गुणस्तरका प्रमाणपत्रहरू र सकारात्मक र नकारात्मक समीक्षाको लागि सोध्नुहोस्। यहाँ उनीहरूले मास्कको बारेमा के लेख्छन्:
अन्ना, 22 वर्ष पुरानो
म मेरो freckles संग कहिल्यै खुशी भएन, तर अब म मन्दिरहरुमा कालो धब्बा छ। यसले मेरो उपस्थितिलाई असर गर्छ, त्यसैले मैले विभिन्न प्रसाधन सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गरें। म बारेमा सकारात्मक समीक्षा को एक धेरै पढ्न Miracle Glow pigmentation मास्क एक महिना पछि मैले यसलाई प्रयोग गर्न थालें, कुरूप खैरो दागहरू गइसकेका छन्, तथापि, उही समयमा मैले टेनि sal सैलुन त्याग गर्नुपर्‍यो। मेरो अनुहार उज्यालो र चिल्लो भएको छ। मलाई मास्क मनपर्‍यो र यसको सिफारिस गर्नमा कुनै समस्या छैन।
म्याट्यू, 31 वर्ष पुरानो
मसँग दाह्री दागहरुका साथ कडा छाला छ, तर अब म गालामा खैरो दागहरू छन्। डाक्टरले मलाई खाना सल्लाह दिए र केही छाला ब्लीचिंग एजेन्ट प्रयोग गर्न भने। मैले चिकनाई खानु हुँदैन, उनको सिफारिसलाई पछ्यायो Miracle Glow मास्क र अक्सर मेरो अनुहार धुन। यसले मलाई एक महिना भन्दा बढी समय लगायो र यसको परिणाम स्वरूप मेरो अनुहार राम्रोसँग चिल्लो छ, म दाह्री खौरन मन पराउँछु, दागहरू हल्का हुन्छन् (तर पूर्ण रूपमा गएन)।
Kate, 29 वर्ष पुरानो
Miracle Glow freckles को लागी मेरो आवश्यक हेरचाह हो। म यसलाई जताततै प्रयोग गर्दछु - हतियार, काँध र अनुहारमा। केवल एक चीज, यो बन्द गर्नु हुँदैन।